Barcelona oo hanatay horyaalka La Liga xilli ciyaareydkan 2017-2018 + SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Barcelona oo hanatay horyaalka La Liga xilli ciyaareydkan 2017-2018 + SAWIRO
Baracelona ayaa ku guulaysatay koobka horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan kadib markii ay 4-2 ku soo dubatay kooxda Deportivo oo si wayn uga dagaalantay in ay heerka labaad u dhacdo balse waxay awoodi wayday in ay wax natiijo fiican ah kulankan ka hesho.
Barcelona ayaa markii 25 aad ku guulaysatay koobka horyaalka la Liga iyada oo waliba koobkan ku qaaday guuldaro la’aan. Lionel Messi ayaa kulankan saddexley goolal ah ka dhaliyay halka Coutinho uu ahaa xidigii goolka furitaanka dhaliyay.
Barcelona ayaa doonaysay in ay soo xidho sheekada koobka horyaalka La Liga iyada oo kulankan iskeentay iyada oo hal dhibic oo kaliya uga baahnayd si ay koobkan ugu guulaysato laakiin taas badalkeeda kooxda martida loo ahaa ee Deportivo ayaa u baahnayd in ayna wax guuldaro ah la kulmin si ay wali ugu sii dagaalami karto in ay heerka labaad ka badbaado.
DAQIIQADII 7 aad Barcelona ayaa xili horeba bilawday xafladaynta koobka horyaalka La Liga iyada oo Philippe Coutinho uu si qurux badan u dhamaystiray kubbad caawin uu shaqadeeda lahaa Ousmane Dembele iyada oo Coutinho uu wax badbaadin ah u diiday goolhayah Deportivo waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Barca hogaanka kula wareegtay.
Philippe Coutinho ayaa dhaliyay goolkiisii 5 aad ee Barcelona isaga oo sidoo kale soo sameeyay 5 gool caawineed 18 kii kulan ee uu Blaugrana ka soo muuqday tan iyo markii uu bishii January ee sanadkan uu Camp Nou ku soo biiray.
DAQIIQADII 17 AAD Deportivo ayaa bilawday in ay u dabaal degto gool uu dhaliyay Lucas Perez laakiin iyada oo calanwaduhu soo daahay ayuu ugu danbayn tilmaamay in xidiga ree Spain uu offside ku jiray kaas oo ahaa go’aan sax ah balse uu la soo daahay.
DAQIIQADII 38 AAD Lionel Messi ayaa gool cajiib ah kooxdiisa kaga dulqaaday culayskii ay Deportivo ku doonaysay goolka barbaraha laakiin Luis Suarez ayaa isna soo sameeyay gool caawin qurux badan isaga oo farsamo fiican adeegsaday waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Barca hogaanka ku dheeraysatay.
Goolkan ayaa ahaa goolkii 30 aad ee uu xili ciyaareedkan Messi ka dhaliyay horyaalka La Liga isaga oo hal gool u soo jirsaday Mohamed Salah laakiin Lionel Messi ayaa markii todobaad gaadhay 30 gool ama wax ka badan oo La Liga sagaalkii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay.
DAQIIQADII 40 AAD Deportivo ayaa isla markiiba jawaab deg deg ah ka bixisay goolka labaad ee Barcelona waxaana goolka rajada kooxdiisa soo nooleeyay dhaliyay Lucas Perez kaas oo caawin uu ka helay Borja Valle goolkan ku dhaliyay, waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay wali Barca hogaanka ciyaarta ku hayso.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayay Deportivo muujisay sida ay wali diyaarka ugu ahayd in ay xili ciyaareedkeeda ka badbaadiso in uu heerka labaad ku dhamaado balse Barcelona ayaa qaybtii hore 2-1 ugu taagnayd guul ay koobka La Liga ugu guulaysan kartay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Deportivo soo laabtay iyada oo dardar laayableh ku socota waxayna kar karisay Barcelona iyada oo nooc kasta oo dhibaato ah ku abuurtay, waxayna Deportivo doonaysay in ayna heerka labaad u dhicin iyada oo aan si waali ah u dagaalamin.
DAQIIQADII 64 AAD Deportivo ayaa la timid goolka barbaraha ee ay sida cad ugu qalantay waxaana goolkan u saxiixay E. Çolak kaas oo caawin ka helay Borges waxayna ciyaartu noqotay barbaro 2-2 ah oo ay Deportivo si laayableh ugu soo laabtay.
Intaa kadib Deportivo ayaa aamintay in ay wali goolal kale la iman karto iyada oo Barcelona u muuqatay kuwo si xun ugu dhibtoonayay weerarka Deportivo ee aan waxba iskula hadhayn waxayna Deportivo abuurtay mawjado fursado ah oo ay goolka saddexaad ku raadinaysay.
DAQIIQADII 68 aad Valverde ayaa ciyaarta ka saaray Ousmane Dembele wuxuuna kooxdiisa ku soo xoojiyay Denis Suárez laakiin markii uu arkay in ayna xaalada waxba iska badalin ayuu Valverde markale daqiiqadii 74 aad uu kaydka uga yeedhay Paulinho isaga oo saaray Philippe Coutinho.
Markii uu Paulinho ciyaarta soo galay waxa uu si buuxda wax uga badalay khadka dhexe ee Barcelona oo furnaa wuxuuna soo celiyay in Barcelona ay kubbada lugta ku dhigto oo ay goolka saddexaad ee guusha si xoogan u raadiso.
DAQIIQADII 81 AAD Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa kubbad layaableh soo wada ciyaaray iyada oo Messi uu isku saaray goolhayaha Deportivo iyo Suarez laakiin darbada uu xidiga ree Uruguay u muuqday in uu goolka guusha ku dhaliyay ayuu goolhayuhu ka beeniyay.
DAQIIQADII 82 AAD Lionel Messi ayaa Deportivo ku qalbi jabiyay goolkiisa labaad iyo kan saddexaad ee kooxdiisa Barcelona kadib markii uu kubbad ay isaga iyo Suarez ku soo kala dhantaaleen difaaca Deportivo uu goolkan ku dhaliyay waxayna ciyaartu noqotay 3-2 ay Barca hogaanka ku soo ceshatay.
Lionel Messi ayaa markii hore dhulka soo dhigay difaacyada Deportivo laakiin kubbada uu Suarez ku horsiiyay goolka hortiisa ayuu xidiga Suarez go’aansaday in markan uu kubbada u celiyo Messi kaas oo lugta midig goolkan ku dhamaystiray.
DAQIIQADII 85 AAD Lionel Messi ayaa dhamaystirtay saddexleyda uu kulankan ka dhaliyay kadib markii uu goolc aawin kale ka helay Luis Suarez oo markale xidiga ree Argentina siiyay fursad gool dhalin fiican ah taas oo aanu Messi iska lumin wuxuuna ciyaarta ka dhigay 4-2 ay Barca ku garaacayso Deportivo oo waqti u muuqatay in ay hogaanka ciyaarta la wareegi kartay intii aanu Messi labada gool ee deg dega ah dhalin.
Lionel Messi ayaa yeeshay 32 gool oo horyaalka La Liga ah isaga oo Mohamed Salah kala wareegay hogaanka gool dhalinta kabta dahabka ah ee Yurub isaga oo hadda xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah xaqiijisatay abaal marinta Pichichi ee horyaalka La Liga.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4-2 ay Barcelona ku xaaqday Deportivo iyada oo markii 25 aad ku guulaysatay koobka La Liga oo ay waliba si guuldaro la’aan ah ugu guulaysatay. Valverde oo sabtidii hore Barcelona kula soo guulaysatay Copa Del Rey ayaa markan la xaqiijisatay koobkii horyaalka ee ugu horeeyay isaga oo macalin u ah Barca.